Iskuulo gaar u ah haweenka ku dhaqan Puntland oo wasaaradda waxbarashada Puntland ay shaacisay inay dhawaan hirgalinayso. – Radio Daljir
Seteembar 4, 2012 4:21 b 0
Garowe, Sept, 04 – Si kor loogu qaado helitaanka fursaha waxbarasho ee haweenka ku dhaqan gobollada Puntland wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa markii ugu horaysay waxay bilawday qorshe lagu hirgalinayo dhismayaal goobo waxbarasho oo gaar u ah haweenka.
Tillaabadaan ayaa wasaaraddu waxay ku tilmaamtay inay sahlayso caqabado markii hore dhanka goobaha waxbarashada ka haystay haweenka.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed C/wahaab Axmed ayaa shaaca ka qaaday qorshahaan wasaaraddu inay ugu talagashay kobcinta waxbarashada haweenka, waxaana agaasimaha oo hadalkiisa sii-wata uu yiri ” Waxaan dhisaynaa illaa 32 dugsi oo laga hirgalinayo dhammaan gobollada Puntland, iskuuladaasi waxaa qayb ka ah dhismayaal gaar u ah haweenka, si kor loogu qaado tacliinta haweenka”.
Md. Maxamed C/wahaab Axmed ayaa tilmaamay in wasaaradda waxbarashadu ay sanadkaan usoo jeedsatay hormarka dhanka waxbarashada, waxaana uu mahad-ballaaran u jeediyay hay’adaha wadashaqaynta la leh wasaaradda waxbarashada iyo deeq-bixiyaasha, isagoo tusaale usoo qaatay xukuumadda Jaban oo uu ku tilmaamay inay kharas badan ku bixisay arrimaha waxbarashada Puntland.
Waa Markii ugu horaysay oo wasaaradda waxbarashada Puntland ay ku dhawaaqdo inay hirgalinayso dhismayaal gaar u ah haweenka ku dhaqan gobollada Puntland, waxaana tillaabadaan ay dhiiri-galinaysaa waxbarista haweenka.